အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ရောဂါရှာဖွေမှုမှားယွင်းနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု - သတင်း Rule
McGill တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအတွက် မွန်ထရီရယ် စူးရှသောသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့သေဆုံးမှုနှုန်းများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ထွက်သတ်မှတ်ထား.
သူတို့သည်တောင်း 1,123 သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာ 18 သို့ 55 တဝန်ခံခံရပြီးနောက်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြည့်စွက်ရန် 24 ကနေဒါရှိဆေးရုံများ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တဦးတည်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတ.
လေ့လာမှုမှာအမြိုးသမီးမြား, သုတေသီတွေ့ရှိရ, ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ဝင်ငွေကွင်းမှလာ, ဆီးချိုရောဂါရှိသည်ဖို့ပိုခဲ့ကြ, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်နှလုံးရောဂါတဲ့မိသားစုသမိုင်း.
အဆိုပါသုတေသီများသည်လူတို့သညျ electrocardiograms ဖို့ပိုမြန် access ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြု (ECGs) မိန်းမများထက်သွေးခဲကာကွယ်တားဆီးဖို့နှလုံးခုန်နုန်းနှင့် fibrinolysis စစျဆေးဖို့.
ပျှမ်းမျှတွင် ယူ. 15 မိနစ်နှင့် 28 မိနစ်, လိုအပ်သလို, လူတို့သညျသူတို့အရေးပေါ်အခန်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေ ECGs သို့မဟုတ် fibrinolysis ပေးအပ်ခြင်းခံရရန်အဘို့အ.
မတူတာကတော့, ကြာသည် 21 မိနစ်နှင့် 36 မိန်းမတို့အဘို့မိနစ်.
“အတူအရေးပေါ်ဌာနကိုမှတင်ပြသူအစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူလူနာ Non-နှလုံးရင်ဘတ်နာကျင်မှု အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်, နှင့်စူးရှသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏ပျံ့နှံ့လူငယ်လူတို့တွင်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအနိမ့်သည်,” ခဲသုတေသီ Louise လေယာဉ်မှူးကပြောပါတယ်.
“ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် triage ပုဂ္ဂိုလ်များကနဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူလူငယ်အမျိုးသမီးများအကြားတစ်ဦးနှလုံးအဖြစ်အပျက်ပယ်ချအံ့သောငှါအကြံပြု, သောကြာကြာတစ်အိမ်မှ ECG ကြားကာလအတွက်ရလဒ်လိမ့်မယ်။”
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကနေဒါ Medical Association Journal မှလက်ရှိပြဿနာထုတ်ဝေခဲ့ကြ.
23240	2 acute သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, ကနေဒါ, ကနေဒါ Medical Association Journal မှ, Electrocardiography, McGill တက္ကသိုလ်မှ, မွန်ထရီရယ်, Myocardial infarction, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← ခရိုင်းယူကရိန်းထံမှလွတ်လပ်ရေးမိန့် တိုကျိုပွဲဦးထွက်ပေါ်ဂျပန် Display ကိုရှယ်ယာကျဆင်း →